Phosithitisi - Wikipedia
I-Posthitis (ebizwa ngokuthi i-pos-THI-tis) ukuvuvukala kwejwabu (isikhuthazi) somthondo womuntu.Kubonakala ngokuvuvukala nokubomvu esikhunjeni futhi kungahle kuhambisane nokukhishwa okunukayo.
Isifo sokuqina kweminwe
Igama elithi posthitis livela kwelesiGrikhi "posthe", elisho ijwabu, ne "-itis", okusho ukuvuvukala.
I-Posthitis ingaba nezimbangela ezithathelwanayo ezifana nama-bacteria noma isikhunta, noma izimbangela ezingezona ezithathelwanayo ezifana ne- contact dermatitis noma i- psoriasis .Ukuvuvukala kungabangelwa yizinto ezicasulayo emvelweni.Izinto eziphilayo ezijwayelekile ezibandakanya i-candida, i-chlamydia, ne-gonorrhea.Isizathu kufanele sitholwe kahle ngaphambi kokuba kunikezwe ukwelashwa.Isici esijwayelekile sobungozi yisifo sikashukela .
I-Posthitis ingaholela ku- phimosis, ukuqiniswa kwejwabu okwenza kube nzima ukuhlehlisa i-glans.I-posthitis ingaholela nasezilondweni ezingaphezulu kanye nasezifweni zama-lymph node.
Inhlanzeko, ikakhulukazi ukuhlanzwa okuvamile kwe-glans, ngokuvamile kubhekwa njengokwanele ukuvikela ukutheleleka nokuvuvukala kwejwabu.Ukuhoxa okuphelele kwejwabu kungenzeka kungenzeki kubafana abangaphansi kweminyaka eyishumi kanti abanye kungenzeka bangakwazi ukulihoxisa ngokuphelele ijwabu labo ukuze balihlanze kuze kube sebeneminyaka eyevile kwengu-20.
Uma kusolwa i-dermatitis yokuxhumana, izinsipho nokunye okucasulayo kwangaphandle kufanele kumiswe futhi kufanele kuphenywe ukungezwani komzimba ne-latex.
Ukwelashwa kuncike ekuboneni imbangela. Izicasuli zemvelo kufanele zisuswe.Ama-antibiotic nama-antifungal angasetshenziswa ukwelapha ukutheleleka, kepha inhlanzeko enhle njengokugcina indawo yomile ibalulekile ukumisa ukuphindeka, noma kunjalo ukugeza ngokweqile ngensipho kungadala i-dermatitis yokuxhumana. 
Uma ukutheleleka kudluliswa ngocansi, abalingani ocansini kufanele baziswe futhi belashwe.
I-Posthitis ne- balanitis (ukuvuvukala kwepenisi ye-glans) kuvame ukuhlangana njenge- balanoposthitis.Ukusoka kungavimbela i-balanoposthitis, noma i-balanitis isengenzeka ngokwehlukana.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Phosithitisi&oldid=93772" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-12 uMfumfu 2021, nge-15:33.